Ukugxeka kunye nokuhlaselwa kweflegi yamanga: ngokusebenzisa isistim, ukuchasana kunye ne-synthesis kwi-New World Order
Kufakwe kuyo NEPNEWS, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	14 Aprili 2017	• 16 Comments
Kubonakala kunzima ukuqonda indlela umdlalo odlalwa ngayo kwi-chessboard yehlabathi. Ehlabathini lamaziko eendaba eendaba, kukho abanye abaye bazukisa uDonald Trump nabanye abambona uPutin njengendoda elwa neNew World Order. Ezi zindawo zokugqibela zihlala zilungiselelwe [...]
I-Nepniews, iindaba ezilungileyo, iingqungquthela, iiflegi zamanga, abeendaba kunye nezopolitiko; yinyani na into engeyinyaniso?
Kufakwe kuyo NEPNEWS, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-28 Disemba 2016	• 63 Comments
Siye sabona ngokukrakra kwiminyaka yamuva. Ngezinye iiwebhsayithi zibike ngezinye izihlandlo zize zifike kwisigqibo sokuba izinto zazingalunganga. Olunye uhlalutyo lukhokelela ekugqibeleni ukuba uloyiko lwalusisigxina kunye nabanye ukuba kwakukho 'iflegi yenkohliso'. Oko akuthethi ukuba zonke izilwanyana [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.431.460